Vaovao - Ahoana no hitazomana ny varingarin-drano
Manaova asa tsara amin'ny fanadiovana, te-hanao asa tsara amin'ny fikojakojana ny varingarina hydraulic, avy eo dia tsy maintsy manao asa fanadiovana tsara izy io. Ity dia lafiny iray tena ilaina tokoa, ny varingarina hydraulic amin'ny fizotran'ny fampiasana maharitra dia hamokatra vovoka sy tasy be dia be, raha tsy diovina ara-potoana dia hisy fiantraikany amin'ny fampiasana ara-dalàna ny vokatra izany, koa tokony hanao asa tsara isika amin'ny fanadiovana ny fitaovana aorian'ny fampiasana azy isan'andro, izay fomba fikojakojana tsara ihany koa ho an'ireo fitaovana ireo.
Voalohany, ny menaka hydraulic dia tokony ovaina tsy tapaka ary ny lamba sivana amin'ny rafitra dia tokony hodiovina mba hiantohana ny fahadiovana sy hanitatra ny androm-piainana.
Faharoa, ny varingarina solika isaky ny ampiasaina, mba hanatanterahana ny fanitarana sy ny fihenan'ny fitsapana hazakazaka 5 kapoka, ary avy eo mihazakazaka amin'ny enta-mavesatra. Fa maninona Amin'izany fomba izany dia mety ho reraka ny rivotra ao amin'ny rafitra ary azo hafanaina aloha ny rafitra. Ny fisian'ny rivotra na rano ao amin'ny rafitra dia afaka misoroka amin'ny fomba mahomby ny fisehoan'ny fipoahana entona (na fandorana) ao amin'ny bolabola varingarina, izay hanimba ny tombo-kase ary hiteraka fivoahan'ny atin'ny vovo-diloilo.
Fahatelo, ny hafanan'ny rafitra dia tokony fehezina tsara. Raha avo loatra ny hafanan'ny solika dia hihena ny ain'ny serivisy. Raha avo loatra ny mari-pana ny menaka mandritra ny fotoana lava dia ho simba maharitra ny tombo-kase na tsy mety mihitsy aza.
Fahefatra, arovy ny ivelany zana-tsoratry ny piston mba hisorohana ny fahasimban'ny tombo-kase amin'ny fikolokoloana sy fikorisana. Diovy ny peratra vovoka amin'ny tombo-kase mirehitra ao amin'ny varingarina menaka sy ny antsanga amin'ny tsorakazo piston, mba hisorohana ny loto eo ambonin'ny vatan'ny piston tsy hiditra amin'ny varingarina misy menaka ary hanimba ny pistona, varingarina na tombo-kase.
Fahadimy, zahao matetika ny kofehy, kofehy ary ireo faritra mampifandray hafa, ary afatory eo noho eo izy ireo raha malalaka.
Fahenina, matetika manosotra ny faritra misy fifandraisana mba hisorohana ny harafesina na akanjo tsy ara-dalàna amin'ny fanjakana tsy misy solika.